အာဇာနည်နေ့ ဆိုတာ အခြားသူတွေအတွက် လုံးဝကို မတရားတဲ့နေ့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အာဇာနည်နေ့ ဆိုတာ အခြားသူတွေအတွက် လုံးဝကို မတရားတဲ့နေ့ 
အာဇာနည်နေ့ ဆိုတာ အခြားသူတွေအတွက် လုံးဝကို မတရားတဲ့နေ့ 
Posted by phone_kyaw on Dec 29, 2011 in Copy/Paste | 16 comments
နေ့ တွေအကြောင်းကို တွေးနေမိတယ်။ အထိမ်းအမှတ်နေ့ တွေအကြောင်းပါ။ ဥပမာ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ၊ အာဇာနည်နေ့ ၊ အမျိုးသားနေ့စတဲ့နေ့ ကြီးမြတ်ကြီးတွေကို ဘယ်သူတွေက သတ်မှတ်တာလဲ။ ဘာ့ကြောင့်သတ်မှတ်တာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို တွေးမိတယ်။ ဒီအထဲကနေ အာဇာနည်နေ့ အကြောင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး တွေးမိတာကို ရှယ်ပေးချင်တယ်။ သဘောမတူမဲ့သူများမယ်လို့ ယူဆတယ်။
ကျနော့်အမြင်က အာဇာနည်နေ့ ဆိုတာ တိုင်းပြည်မှာမရှိသင့်ဘူးလို့ ယူဆတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ တခြားသူတွေအတွက် မတရားလို့ ပါ။ အာဇာနည်နေ့ ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ လုပ်ကြံခံရလို့ သေသွားတဲ့နေ့ ကို ခေါ်တာပါ။ တကယ်လို့ သူတို့ မသေခဲ့ရင်လည်း အာဇာနည်နေ့ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ အာဇာနည်နေ့ မှာ အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေဖြစ်နေတဲ့ လူတွေက လက်ချိုးရေလို့ တောင်ရတယ်။ ဒီအထဲမှာ ရဲဘော်ကိုထွေးလို လူတောင် အာဇာနည်ဖြစ်သွားတော့ မနာလိုစရာတောင်ကောင်းနေသေးတယ်။သူ့ ကိုကြတော့ ဆင်ဖြူတော်မှီပြီး ကြံစုပ်တဲ့လူလို့ ပြောလို့ ရမလား။
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်တွေ၊ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေ၊ ဗကပက လူကြီးတွေ စတဲ့ ရေတွက်လို့ မရတဲ့ သူရဲကောင်းတွေလည်း မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် လုပ်ခဲ့ကြတာပဲ။ သေတဲ့သူလည်း သေကုန်ကြပြီ။ ရှင်တဲ့သူလည်းရှိတာပဲ။ သူတို့ ကြတော့ အာဇာနည်မဖြစ်ပဲ လုပ်ကြံလို့ သေတဲ့သူမှ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားစရာပဲ။ ဆိုတော့ သူများလုပ်ကြံလို့ သေမှ သူရဲကောင်းဖြစ်မှာလား။ တိုက်ပွဲမှာ ကျခဲ့တဲ့လူတွေလည်း အာဇာနည်မဖြစ်ထိုက်ဘူးလား။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ အာဇာနည်နေ့ မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အာဇာနည်တွေရဲ့ စာရင်းကို ပြင်သင့်ပြီလို့ ထင်တယ်။ဒါမှမဟုတ် အာဇာနည်နေ့ ဆိုပြီး မရှိသင့်ဘူး။ ဒီနေ့ အစား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ အဖွဲ့ လုပ်ကြံခံရလို့ သေတဲ့နေ့ ဆိုပြီး သတ်မှတ်သင့်ပါကြောင်း။ ဒါမှမဟုတ် ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးတဲ့နေ့ ။
်ဒီအချိန် မှာ ဒီလို ရေးရဲတာ ဘာပြော ရမှန်း တောင် မသိ တော့ဘူး။လွတ်လပ် စွာ သဘောကွဲခွင့် ရှိတာ ပေါ့၊
ပုဂိုလ် ရေးမဟုတ် ပဲအရည်အချင်း အဓိက ထားသင့်တာပေါ့။
ကော်မန့်ရေတဲ့သူတွေ သိပ်အတာပဲ တိတ်တိတ် ပုန်း သူ့ရဲ့ ပထွေးက ပြောချင်တာကတော့
မယားပါသား ဘုံးကျော်က စိတ္တဇ ဆေးရုံ က ထွက်ပြေး လာတာ၊အရူးလက်မှတ်မရှိဘူး…၊
ခင်ဗျာက ရဲဘော်ထွေးလောက်တောင် မြန်မာနိုင်ငံကိုဘာကောင်းကျိုး ပြုခဲ.လို.လည်း သူများ အကြောင်းမပြောခင် ကိုယ်ကိုကို.အရင်စစ်ဆေး သူများတွေဝမ်းနည်းနေတည်း အချိန်ခင်ဗျာကတစ်မျိုး.
POOR Phone Kyaw!
I am not so surprise to hear such an ungrateful words from mouth of Phone Kyaw who has little or no appreciation of what does it mean by Arzarni.Reading his previous posts on Daw Su ( expressing that he’s used to get starved by following Daw Su and finally ended up in jail , as he mentioned ) before, I can figure out what type of man is Phone Kyaw. Such kind of people , whenever they do something they do withavery narrow personal interest , they do politics to be popular or to get rich quickly, they don’t know such ideas as doing politics isasort of sacrificing one’s own life for the well-being of the whole country or society. I don’t blame him, he hasaright to express his opinion , but unfortunately , we all from village getachance to know what type of man is phone Kyaw. In my opinion, he’s desperately trying to create very unpopular posts with an idea to get popularity but lacking intellectualism.Whatapity and shame!
ကိုဘုန်းကျော်သည်1999ခုနှစ်မှ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်၍ထင်ပါသည်။ကတ္တီပါအနက်နှင့်ထုပ်ထားသော သမိုင်းကိုသင်ကြားပုံသွင်းထားသော သမိုင်း၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရဟန်တူပါသည်၊1988 ခုနှစ်နောင်းပိုင်း မြန်မာစစ်တပ်အားလုံး ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ပုံများ ကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်ကို စစ်တပ်ဝန်းတွင်ကြီးပြင်းခဲ့သော ဘုန်းကျော် တော်တော်သဘောတွေ့သည်ထင်ပါသည်။ထိုကြောင့်ဘုန်းကျော်၏စိတ်ဓါတ်ရေးရာပိုင်းသည်မြန်မာပြည်သူများနှင့်တသားတည်းရှိရန် မော်စီတုန်းကိုအလေးနီပြုမည့်အစား အမျိုးသားအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တို့၏ဂုဏ်အင်္ဂါနှင့်ညီညွတ်သည့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲနှင့်ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာ အသက်စွန့်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာ့အာဇာနည်များကို ချစ်မြတ်နိုးသည့်စိတ်မွေးပါဟုအကြံပြုချင်ပါသည်၊နောက်တချက်အကြံပြူလိုပါသေးသည် ဘုန်းကျော် ကလေးသူငယ်ကျောင်းသားအရွယ်က အာဇာနည်နေ့ကျင်းပသည့်အလေ့ကို စစ်တပ်ကပါယ်ဖျက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် အာဇာနည်များအား ဂါရ၀ မပြုဘူးသူဖြစ်မည်ထင်ပါသည် အဇာနည်နေ့အလေးပြုသည့်အခါ ဦးဆောင်သူမှ “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ကျဆုံးလေပြီးသောအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များဟု ဆိုသောကြောင့် လွတ်လပ်တိုက်ပွဲတလျှောက်ကျဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်အားလုံးကို ရည်ညွှန်းတာ သိသာပါသည် မြန်မာစာမြန်မာစကား သေချာလေ့လာပါဟု အကြံပြုလိုပါသည်၊ကိုဘုန်းကျော်၏ ဖခင်သည်တပ်ကြပ်ကြီးအဆင့်တာဝန်တမ်းဘူးသည်ဟုဆိုပါသည် မဲသဝေါ တိုက်ပွဲမှာ သေနတ်မိုးပေါ်ထောင်ပစ်တဲ့အကောင်တွေ ချေးထွက်သေးထွက်ကောင်တွေတောင် သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်သေးရင် ရဲဘော်ထွေး အာဇာနည် မှတ်တပ်းဝင်တာကို ပြည်သူကအသိအမှတ်ပြုတာ မှားများနေလား ကိုဘုန်းကျော်
We should have originality and we should think differently on several issues but before doing so we should at least haveasolid foundation of moral values and norms.Thinking differently just for the sake of thinking differently is unworthy.
ခင်များ အမေလင်တွေမပါလို့ လား ကိုဘုန်းကျော်။မျက်ကန်းမျိုးချစ်အသိလက်တစ်ဆစ်နဲ့ ဝင်ပြောမနေနဲ့ ။
Yebaw Htwe is performing his duty while he was killed together with the rest of the Arzinis by those filthy assassins on that unfortunate July day.We (our leaders) decided at that time to include him in the list because( in my opinion)
-He’s the one who was killed while performing his duty together with the whole bunch of other arzarnis
-To keep him out of the arzarni would beasuchadiscrimination that would later affect the image of the country and society ( maybe if leaders at that time are suchanarrow minded people like Phone Kyaw, they may exclude him)
-The very nature of this assassination at that crucial time for independence make the whole country wholeheartedly consented to commemorate and honor the whole group as arzarnis and the day as day of arzarni(martyr) without any idea to exclude him.
ကိုဘုန်းကျော်၊ ရှင့်ဆောင်းပါးတွေဖတ်ရတာ နဲနဲဖောင်းဖြစ်နေသလားလို့။ အခုတလောတော်တော် အဆင်မပြေဘူး။ ”အစလ ( နိုင်ငံရေးခိုလှုံထားတယ် )” ဆိုလဲ ငြိမ်ငြိမ်နေပါ လား။ ထောက်ပံ့ကြေး ရတုန်းကောင်းပြီးကောင်းရဲ့နဲ့ အခုအစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးယူ လိုက်တော့ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံလဲ လုပ်လို့မရ ထောက်ပံကြေးလဲမရတော့တာနဲ့ပတ်မရမ်းပါနဲ့။ မှန်မှန်ကန်ကန်ရပ်တည်ပါ။ အတိုက်အခံလုပ် ရမှဆိုလဲတောခိုပေါ့။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်။ သမိုင်းကိုလုပ်မစားနဲ့။
အကို အကောင်းမြင်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ဆက်လျှောက်မယ်ဆို .. ဟီး ..
အာဇာနည်နေ့ ဆိုတာကို… ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ..နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၆ရှိတာမှာ.. ၉နိုင်ငံကလုပ်ကြပါတယ်..။
ကိုရင်ဘုန်းကျော်ပြောတာကို.. အကောင်းမြင်ပြီး လိုက်ကြည့်မိတာပါပဲ..။
အာဇာနည်နေ့ကျင်းပတဲ့..နိုင်ငံတွေ သမိုင်းကြောင်းပါလိုက်ကြည့်မိတော့… တော်တော်အံ့သြစရာကောင်းတယ်..။
မြန်မာပြည်က.. အိန္ဒိယရဲ့ရှေ့ကနေ..အာဇာနည်နေ့လုပ်သွား(ဖြစ်သွား) တာကိုရောပေါ့..။
Martyrs’ Day (Iran), the Liberation of Khorramshahr in 1982 is celebrated as Martyrs’ Day in Iran on its anniversary, May 24.
Genocide Remembrance Day, also known as Armenian Christian Martyr day, on April 24, commemorating Armenian genocide from 1915 to 1923 in Ottoman Empire Turkey.
Memorial Day for War Martyrs (Vietnam), on July 27, in Vietnam.
ထော်လော်ကန့်လန့် ဇောက်ထိုးမိုးမျော် မောင်ကုန်းအော်၊
အများသူငါ စာမျက်နှာမှာ ပြောင်းပြန်ရေးမှ နင်အားရ။
ပေါ့ပေါ့ရေး ပေါ့ပေါ့တင် ရွာထဲဝင်
နင့်ဟာကိုနင်လှန် ရေးချင်ရာ ပြောင်းပြန်ရေး
မှန်မမှန် မှန်ထောင်ကာ နင့်ဖာသာနင်ပြန်ကြည့််
ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးတာ national loss ပါ
အကြောင်းခြင်းရာအသွယ်သွယ်၏ အတိမ်အနက်ကို မိမိရှိသောပေတံနှင့်တိုင်း၍ အကောင်းအဆိုးဝေဖန် ပိုင်းခြာကြသည်ပေါ့။
ပေ ၅၀ နက်တဲ့ တွင်းတစ်ခုကို ၂ပေလောက်ရှိတဲ့ပေတံနှင့်တိုင်းတာ၍ အတိုင်းအတာအမှန်မထွက်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်ကို သတိချပ်သင့်သည်။
ပေ ၅၀ နက်သောတွင်းတစ်ခုကို မီတာ (၂၀)လောက်ပါသော ပေတံဖြင့်တိုင်းတာခြင်းအား လက်ခံပါသည်။
ဒီအကြောင်းတွေပြောရတာကလည်း တော်တော် ရှည်ရှည်လျှားလျှား ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်း
မဟုတ်လို့ကတော့ Aဘေး ဘုန်းကျော်ကို ထောက်ခံသလိုဖြစ်နေဦးမယ်
( ကျုပ်လည်း ဗရုတ်သုတ္ခဝင်ပြောတာပါ ဖုတ်ကျော်ဆိုတာ ကျုပ်အဘလောက်ရှိရင်တော့
ကန်တော့ပါဗျာ ဆဲလက်စနဲ့ ဆဲလိုက်ပါဦးမယ် Aဗျေးဂျီး )
ဗမာတွေရော ကလားတွေရော တရုပ်တွေရော ကချင် ကယား ကရင် ခြင်း မွန် ရခိုင် ရှမ်း
လီးလျှော လားဟူ ( မပါတဲ့လူတွေ ကိုယ့်ဖာသါဝင်ပါ ) တွေ
အကုန်းလုံး စုပြီး ကိုယ့်ရပ်ကွက်နဲ့ ကိုယ်နေ ကိုယ့်ခြံမြေဆိုပြီး စာချုပ်ကြ အမွေလုကြ
ပြီးရင် ဟို စီမံကိန်း ဒီစီမံကိန်း ဆိုပြီး အသိမ်းခံရ တဲ့ နိုင်ငံကို ဘာနိုင်ငံလို့ ခေါ်သဒုံး
အများအဆို မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ချို့က လုပ်သေးတယ် ဗမာနိုင်ငံ
အဲ့သည်နိုင်ငံထဲက ဘုရားစင်တွေမှာ နတ်ရုပ်တွေ အပီနေရာယူထားသလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်
( ဒါက ပဏာပ အခြေခံလေးပြောကြည့်တာ )
အာဇာနည်ဆိုတဲ့သဘောကို သေခြာတွေးကြည့်ရင် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ထဲကိုဘဲ ပေးသင့်တယ်
ဒါတောင် အသေခြာ ပြောဆိုကြရဦးမှာ
အာဇာနည်နေ့ဆိုတာကို ကျုပ်တို့ပြောကြတဲ့အခါ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခမ်းခမ်းနားနားပြောရမှာက
အညတြသူရဲကောင်းတွေအကြောင်းဆိုတာကို လေးလေးနက်နက် လက္ခံကြပါ
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကို မှီတည်ပြီး ဟိုလူလည်းအာဇာနည် ဒီလူလဲအာဇာနည်ဆိုရင်တော့
( သောက်ရေးထဲ ညောင်နာနာနဲ့အော်တဲ့ကောင်ကလည်း သူ့ကိုယ်သူ အာဇာနည်ဆိုပြီး လုပ်သေးတယ်
ဓာတ် .. ဘဲ .. ( စကားချပ် ) )
အဆောက်အဦးတစ်ခုရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအရ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်သဲကျောက်တွေဟာ
ကျရာကဏ္ဍကနေ ပါဝင်တာလေး ထောက်ပြတာပါ
ဒီနေရာမှာ ပိသုကာ ဆိုတာ အထူးသဖြင့်
အဆောက်အဦးကို ပုံဖော်သူလို့ ကျုပ်တို့နားလည်ကြရမှာပါဘဲ
ဒီလိုပြောလိုက်လို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တစ်ယောက်ကိုတော့ ပိသုကာကြီးအဖြစ်လက္ခံပြီး
ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့ ပန်းရံဆရာတွေ ဘာညာယကွိကွတွေအဲ့သည်လိုမြင်ကြဘို့ပါ
ဒါ့ကြောင့် အာဇာနည်နေ့ ဆိုတာကို ကျုပ်တို့ပြောရင်
အညတြ သူရဲကောင်းတွေ အကြောင်းကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနားနား ပြောမှရမယ်လို့
ခင်ဗျားတို့ ဘစ်ဇနစ်ဆရာဂျီးဒွေနားလည်အောင် နည်းနည်းတီးခေါက်ပြခြင်တာကတော့
ဘာနေ့ ညာနေ့ ဆိုတာတွေဟာ လုပ်သားပြည်သူတွေကို စောက်လုပ်မလုပ်ဘဲ စောက်ဆံပေးရတယ်ဆိုတာ
ဘစ်ဇနစ်သဘော လေး တွေးကြည့်ဘို့ပါ
( တကယ့်သူရဲကောင်းတွေကတော့ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ အသက်တွေကို စတေးသွားကြပြီ
ကျန်ခဲ့တဲ့ စောက်သုံးမကျတဲ့ကောင်တွေကတော့ စောက်မျိုးတော်ပြီး ဂုဏ်ယူနေကြတယ် )
ဘယ်လိုမှ ညှိနှိုင်းလို့ မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်
A ဘေး ဒဘုံ ဘုန်းကျော် မသာပေါ်တဲ့နေ့ကိုဘဲ အာဇာနည်နေ့လုပ်ကြပေါ့ဗျာ
…. နှစ်ပုံ ဦးဘဇင်းဘဒ္ဒ န္တမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု